Football Khabar » युभेन्टसले नापोलीसँग नखेली पाएको ३–० को जित रद्द : खोसिएको नापोलीको अंक पनि फिर्ता !
युभेन्टसले नापोलीसँग नखेली पाएको ३–० को जित रद्द : खोसिएको नापोलीको अंक पनि फिर्ता !
इटालियन सिरी ए लिगमा यो सिजन कमजोर स्थितिबाट अघि बढिरहेको युभेन्टसको ३ अंक कट्टा गरिएको छ । गत अक्टोबर महिनामा नापोलीसँगको खेल नखेली ३–० को जित पाउँदा प्राप्त भएको ३ अंक खोसिएको हो । त्यसबेला युभेन्टसको घरेलु मैदानमा हुने सो खेलमा नापोली सामेल भएको थिएन । तर, सिरी ए लिग समितिले खेल निर्धारित तालिकाअनुसारै गर्ने अडान राखेपछि युभेन्टस आफू सबै प्रक्रिया पूरा गरे मैदानमा उत्रियो । र, वार्म–अर्प पनि गरेको थियो ।
तर, नापोली खेलमा सामेल हुन मैदानमा उपस्थित नभएपछि १० मिनेट बाँकी छँदा खेल स्थगित भएको थियो । पछि लिग समितिले खेल समयमा नापोली मैदानमा सामेल नभएकाले युभेन्टसलाई सो खेलबापत ३–० को जित दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाट युभेन्टसले ३ अंक पाएको थियो । सँगै, कारबाहीस्वरूप नापोलीको खाताबाट १ अंक समेत कटौती गरिएको थियो ।
नापोलीले आफ्ना खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनको सुझावअनुसारै खेलमा सामेल हुन नसकेको कुरा युभेन्टस र लिगलाई अन्तिम समयमा जानकारी गराएको थियो । तर, सिनियर टोलीका ६ जनाभन्दा बढीमा कोरोना नदेखिएकाले खेलमा सामेल नहुने नापोलीको निर्णय गलत रहेको ठहर गर्दै खेलमा सामेल हुनुपर्ने र नभए युभेन्टस स्वतः विजयी हुने फैसला लिग समितिले गरेको थियो ।
तर, नापोलीले लिग समितिको सो निणर्यपछि आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै इटालियन ओलम्पिक समितिमा अपिल दर्ता गराएको थियो । सो अपिलमा ओलम्पिक समितिले सुनुवाइ गर्दै लिग समितिले युभेन्टसलाई दिएको ३–० को जितलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । साथै, ओलम्पिक समितिले सिरी ए लिगलाई सो खेललाई स्थगित भएको मानेर पुनः खेलाउनका लागि नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिले युभेन्टसलाई दिएको ३–० को जित उल्टाएसँगै युभेन्टसको खाताबाट ३ अंक फिर्ता समेत भएको छ । साथै, नापोलीको खाताबाट कारबाहीस्वरूप काटिएको १ अंक पनि खातामा फिर्ता भएको छ । अब युभेन्टस र नापोलीको सो खेलका लागि लिगले नयाँ तालिका बनाएर खेल खेलाउनेछ । हाललाई सो खेल स्थगित रूपमा रहनेछ ।
अब युभेन्टसको खातामा अब १३ खेलपछि २४ अंक मात्रै भएको छ । नापोलीको खातामा १२ खेलपछि २४ नै अंक छ । युभेन्टस गत राति आफ्नो घरमा फियोरेन्टिनासँग ०–३ ले पराजित भएको थियो, जुन उसका लागि सिजनको पहिलो हार थियो । यता, नापोलीले आजै राति टोरिनोसँग आफ्नो खेल खेल्दैछ । सो खेल जिते नापोली युभेन्टसलाई ३ अंकले पछि पार्दै तेस्रो स्थानमा यथावत रहनेछ ।
प्रकाशित मिति ८ पुष २०७७, बुधबार २०:००